India inopedza zvese zvinorambidzwa kwekufamba, ichivhurazve miganhu kubva muna Gumiguru
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » India inopedza zvese zvinorambidzwa kwekufamba, ichivhurazve miganhu kubva muna Gumiguru
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • India Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vakuru ve Ministry of Home vafunga kutanga kupa matsva maVisa evashanyi evatorwa vanobva kuIndia kuburikidza nendege dzakabhadharwa kubva muna Gumiguru 15, 2021.
India yakaunza kukiyiwa kwakasimba uye kumisa mavisa evatorwa nekuda kwekutyisidzira kwakakonzerwa nenjodzi yeCOVID-19 munaKurume 2020.
Kuvhurwazve kunouya sezvo India iri kutsvaga kuwedzera hupfumi hwayo mushure meyakaipisisa wave COVID-19 pakutanga kwa2021.
Vakuru veIndia vanotsvaga kusimbisa hupfumi nekubatsira kutanga patsva kushanya, inova chikamu chakakosha kuhupfumi hwenyika.
Muna Kurume we2020, Mutungamiriri weIndia, Narendra Modi akagadza kuvharira kwakaomarara uye akabvisa mavhiza ekupinda evashanyi vekunze nekuda kwekutyisidzira kukuru kwakapihwa nedenda recoronavirus, ichivhara miganhu yenyika kune vashanyi vekunze.
Nhasi, vakuru vehurumende yeIndia vazivisa kuti hurumende ichavhurazve miganhu kune vashanyi vekunze kutanga kubva Gumiguru, vachipedzisa zvirambidzo zvagara kwerinopfuura gore.
India's Ushumiri hwepamba yakaburitsa gwaro neChina, ichizivisa kuti vakuru vehurumende "vafunga kutanga kupa maVisa eVashanyi matsva evatorwa vanobva kuIndia kuburikidza nendege dzakabhadharwa kubva muna Gumiguru 15, 2021."
Kuvhurwa kwemuganhu kunouya se India inotsvaga kudzoreredza hupfumi hwayo mushure mekukutu kweECVID-19 pakutanga kwa2021 kwakakonzera kutenderera mazana mana ezviuru zvehutachiona uye kufa kwevanhu zviuru zvina pazuva, zvipatara zvakakurisa uye kumanikidza matanho akaomarara kutorwa mukuyedza kudzora hutachiona kudzora .
Nevanopfuura mamirioni mazana maviri nemaIndia izvozvi zvakapetwa kaviri uye nyaya dzakadonhedza kusvika panosvika zviuru makumi maviri pazuva, vakuru vakuru vakatsvaga kusimbisa hupfumi nekubatsira kutanga patsva kushanya, inova chikamu chakakosha kuhupfumi hweIndia.
Iko kukanganisa kwezvirambidzo kwakanyanya kuremadza Indiaindasitiri yekufamba, zvichikonzera vashoma pane mamirioni matatu evashanyi mu3, inova 2020% yakadonha kubva pagore rapfuura, maererano nehuwandu hwehurumende.
Nekudaro, kunyangwe ichikurudzira kudzoka kwevashanyi kuIndia, hurumende yenyika yaive pachena kuti vese vashanyi vachatarisirwa kutevedzera mitemo yakaoma yekuchengetedza yeCOVID-19 panguva yekushanya kwavo. Hazvisati zvanyatsojeka hazvo kuti ndezvipi chaizvo zvinodiwa izvo vashanyi vachatarisirwa kusangana vasati vaenda kunyika.